धा'रिलो हति'यार प्रयोग गरी ह'त्या गरेको अवस्थामा एक युवकको शव फेला
काठमाडौँ, ३२ साउन । धा’रिलो हति’यार प्रयोग गरी ह’त्या गरेको अवस्थामा रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा एक युवकको शव फेला परेको छ । आइतबार बिहान शव देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
उक्त शव गरुडा नगरपालिका–८ स्थित जिगडियाटोका १७ वर्षीय निरन्जन राम चमारको रहेको स्थानीयले दा’वी गरेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका डीएसपी ज्ञानकुमार महतोका अनुसार ती युवकको गाउँदेखि करीब तीनसय मिटर टाढा शव भेटिएको थियो ।
खबर पाएलगत्तै प्रहरी तत्कालै घ’टनास्थल पुगेर अनु’सन्धान गरिरहेको छ । तालिम प्राप्त कुकुर ल्याएरसमेत अनु’सन्धान गरिने बताइएको छ । ती युवकको शव धानखेत नजिकै रहेको पानी जमेको जलकुम्भी झारमा फेला परेको थियो ।
काठमाडौं, ३२ साउन। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको लागि इबोलाविरुद्धको रेमडिसिभिर औषधिको सफल प्रयोग भएको छ। कोरोना संक्रमण भएपछि उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएका विराट मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले रेमडिसिभिर प्रयोगपछि स्वास्थ्यलाभ गरेका छन् ‌।
नेपाल सरकारले भने यो औषधी प्रयोगका लागि भर्खरै अनुमति दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले पनि यो औषधी आयातका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। प्लाज्मा थेरापी र रेमडिसिभिरको प्रयोगबाट कोरोना संक्रमितको उपचार गरेका चिकित्सकहरूले यी दुवै विधि नेपालमा करिब-करिब सफल भएको दाबी गरेका छन्‌। संक्रमितको उपचारका लागि नेपालमा पहिलोपटक प्लाज्मा थेरापी गरिएका डा.कार्कीले नै यो औषधी आफूसँगै ल्याएका थिए।
अमेरिकाले कोरोना संक्रमितलाई इबोला विरुद्धको औषधी दिँदै आएको शिक्षणअस्पतालका चिकित्सकहरूका अनुसार इबोलाको औषधी दिइएका डा. कार्कीको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सुधारोन्मुख रहेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्‌ले भने रेमडिसिभिरको प्रयोग क्लिनिकल अध्ययनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न सक्नेगरी अनुमति दिएको छ।
यसअघि विभिन्न देशमा चिकित्सकहरूले गम्भीर अवस्थामा पुगेका संक्रमितलाई यो औषधि दिँदै आएका थिए। साथै, बेलायतमा बाथ र दमको उपचार गर्न प्रयोग हुने डेक्सामेथासोनको प्रयोग गरी गम्भीर अवस्थाका कैयौं बिरामीलाई बचाइएको जानकरी छ।
परिषद्‌ले विभागलाई यो औषधी आयात गर्नका लागि अनुमति प्रदान गर्न पत्राचार गरेको थियो। उक्त औषधी संक्रमितको उपचारमा लाभदायी देखिएपछि औषधि व्यवस्था विभागले आयातकर्ताहरूलाई रेमडिसिभिर आयात गर्न अनुमति दिएको हो।
यसअघि औषधि कोरोना संक्रमणका कारण गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूलाई लाभदायी देखिएपछि नेपालमा पनि अनुमति दिन चिकित्सकहरूले सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका थिए। इबोला संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने यो एन्टिभाइरल औषधि पहिलोपटक अमेरिकाको गिलियड साइन्स नामक कम्पनीले तयार गरेको थियो। हेपाटाइटिस सीबाट संक्रमितलाई उपचार गर्न बनाइएको यो औषधि इबोलाका बिरामीको उपचारमा निकै सफल देखिएको छ।
पहिले भने कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि रेमडिसिभिर प्रयोग गर्न सरकारले अनुमति दिएको थिएन। अनुमति नपाएपनि अवैध रूपमै यो औषधी प्रयोग भइरहेको थियो। र नेपालको बजारमा पर्याप्त मात्रामा नपाइएपछि भारतबाट रेमडिसिभिरको अवैध आयात समेत भएको थियो। अब भने आयातकर्ताहरूले विभागलाई यी औषधी तीन दिनभित्र ल्याइने बताएका छन्‌।